Inthanethi, Web Hosting
I-Web Server - isicelo ukuthi unesibopho nokuhlinzekwa kolwazi efomini zamakhasi ewebhu. Ngaphezu kwalokho, uyena obangela ezihlukahlukene izici ezengeziwe, kuhlanganise:
ukukhishwa ezihlukahlukene izicelo abhalwe PHP, ASP nezinye izilimi izinhlelo;
ukusekela ukuxhumana okuphephile esebenzisa i-HTTPS;
amaseva web Eziyisisekelo
Namuhla, ethandwa kakhulu iseva Apache I-Web, sibonga ukuhambisana ne inqwaba izinhlelo yokusebenza ilayisensi khulula.
In imvelo yenkampani, abasebenzisi ngokuvamile zisebenzisa-product efanayo nalena ebizwa ngokuthi i-Internet Information Services (IIS), athuthukile-Microsoft.
Kwezinye izimo, ezifana isidingo ukwandisa isivinini ukulayisha okuqukethwe static, noma imisebenzi ethile kule isicelo, aye ayisebenzisa kaningi ukusetshenziswa web server Nginx, lighttpd nabanye.
Izimiso ukusebenza kwe-web server
Ngemva kokuthola isicelo kusukela umsebenzisi, i-web server, kuye ngohlobo wefayela eceliwe, ithumela yona le iklayenti noma iqala ekunikeleni ikhasi. Lokhu yakha ikhodi impendulo elikhombisa kokuphothula ukusebenza noma yimaphi amaphutha.
Phakathi ukucutshungulwa emakhasini Web server oluqalisa izindlela ezihlukahlukene zokubhala noma izicelo, uma kunesidingo, uthola idatha kusuka kubo, futhi ngemva kokuguquka indlela ofuna okuthunyelwa iklayenti. Ngokuvamile umphumela uba iseva Web, I-eklanyelwe i-HTML, ngokubonisa okuyinto waziphatha isiphequluli. Kunezinye okuhlukile izimpendulo, isibonelo, izinhlelo asebenza kudivayisi umsebenzisi zifike idatha ku XML, i-JSON, nokunye.
Ukuqokwa amaseva Web wendawo
Ukuthuthukisa izinhlelo zokusebenza, noma iyiphi uMklami ebhekene isidingo ukuhlolwa yayo njalo. Ngokuvamile ngalezi zinhloso kulungile ukusebenzisa iwebhu kuseva yendawo, okuyinto efakwe ngqo kwikhompyutha kanjiniyela. Lokhu kungenxa ikhono ngokushesha uhlele, kanye nokuntuleka isidingo uxhumano unomphela kumshini akude.
Hlola ukubukeka we-HTML-Amakhasi kungenzeka ngaphandle kwesofthiwe eyengeziwe usebenzisa umsebenzi ifayela elivuliwe. Kulokhu, isiphequluli ngeke akhiphe isicelo, futhi nje ubonisa wonke umbhalo, abagcina HTML-yomdwebo. Lokhu kungaba nemiphumela engajwayelekile. Ukuze kuzuzwe imiphumela uhambisane labo owawuzoba etholwe ukubeka umthombo ku-intanethi, kwenza iseva web, ukufakwa wenziwa kukhompyutha wendawo.
Amaphakheji konjiniyela noma ukufakwa ezimele kanye ukucushwa kwe-Web server
Iningi amaseva web basakaza mahhala futhi ngaphansi kwemigomo yamalayisense khulula. imikhiqizo ezikhokhelwayo ezingavamile futhi zidinga, njengoba umthetho, kuphela endaweni yebhizinisi. Download futhi ufake isofthiwe ngokwakho izinkinga zabo ikhompyutha akuyona. isigaba Okuningi eziyinkimbinkimbi - kulungiselelwa. -Web server kwi ukumisa yayo okuzenzakalelayo kuzokuhlupha ukusetshenziswa nsuku zonke, ngisho ngesikhathi ukuhlolwa isicelo. Ngakho kufanele uhlele amafayela ambalwa ukuze ucacise imingcele edingekayo.
Enye indlela lidumile kubasebenzisi-Windows. Ihlala e ukusetshenziswa amaphakheji isicelo onjiniyela. Ngo kit enjalo ngokushesha zihlanganisa: web server, ukuphathwa semininingwane uhlelo MySQL, ngezilimi ezahlukene zokuhlela. Kulesi samuntu, lapho efakwe wendawo computer konke uzobe amisiwe ngokuzenzakalelayo.
Kukhethwa ukufakwa ongazikhetha oluncike ekutheni esizithandayo ukuqeqeshwa umsebenzisi. Ezimweni eziningi, ungasebenzisa ikhithi, nakuba kungase kube izinguqulo ezindala ze-izilimi izinhlelo noma yolwazi ezingaba kakhulu izinkinga umklamo kanye nokuzikhethela of ibamba umhlinzeki ukusingatha umthombo ngomumo.
Ukufaka web server wendawo ku ewumshini
Umshini virtual ikuvumela ukuba agijime kwi okufanayo kukhompyutha izimo eziningi of yokusebenza izinhlelo. Futhi kungase kube ngisho abavela emikhayeni ehlukene. Ngokwesibonelo, ungakwazi ukusebenzisa i-Windows kusuka Linux kanye FreeBSD.
Ukufaka Web server ukuhlola izicelo noma amasayithi emshinini virtual ukwakha ukumisa, lo efanayo kakhulu izimo zangempela lapho umsebenzi kuyokwenzeka. Eziningi zanamuhla ukusingathwa ezisekelweni egijima ku-Linux esibangela isofthiwe ukumisa ethize. On the umshini we-virtual, ungakwazi ukufaka uhlelo lokusebenza efanayo, setha eduze ngokoqobo isakhiwo ifayela, khetha version esifanele izilimi izinhlelo nokuphathwa semininingwane izinhlelo. Enye inzuzo ukuthi ikhono ukuhlola amaphrojekthi amaningi ezidinga ezihlukahlukene ukucupha.
Bangasondela wekhasi futhi abaphumeleli. Umsebenzisi uzodinga ukuba ahlole imibhalo hhayi kuphela zokumisa nokufaka iseva web, kanye nezinye izinhlelo, kodwa futhi imihlahlandlela ohlelweni lokusebenza uqobo. Ukuze isethaphu okusheshayo imishini virtual ungakwazi futhi nezipesheli control panel, okuzozibuyekezela enze ukufakwa kanye ukucushwa kwe-Web server nezinye izinhlelo zokusebenza.
MySQL - Iyini?. Iphutha MySQL
Inethiwekhi ikhompyutha olandelwayo enzelwe oshumayela amakhompyutha 'ukukhulumisana' ngokusebenzisa inethiwekhi
Kungase kutholakale ibamba inkampani hosting.reg.ru